Kipriano avy any Kartago - Wikipedia
I Kipriano avy any Kartago
I Kipriano avy any Kartago, izay teraka tamin'ny taona 200, dia evekan'ny Fiangonana tany Afrika, maty martira tamin'ny 14 Septambra 258 tamin'ny fanenjahana Kristiana nataon'ny emperora Valeriano. Thaschus Cæcilius Cyprianus no anarany amin'ny teny latina. Isaina ho Rain'ny Fiangonana latina i Kiprano.
Fianakaviana ambony tsy kristiana tao Kartago no nipoirany, nefa nozarainy tamin'ny mahantra ny ankamaroan'ny fananany rehefa niova ho Kristiana izy tamin'ny taona 245. Voafidy ho evekan'i Kartago izy tamin'ny taona 249. Fotoana fohy taorian'izany dia nanomboka ny fanenjehan'ny emperora Dekio ny Kristiana ka niala an'i Kartago i Kipriano. Maro ny Kristiana no nanda ny finoany tamin'izany fanenjehana izany.
Nitsahatrany fanenjahana tamin'ny taona 251 rehefa nanapaka ny emperora Galo. Nizara ny hevitry ny Fiangonana ny amin'ireo mpanda ny finoany sy ny amin'ireo izay efa nataon'ny mpampiana-diso batemy na batisa. Ireo izay nanda ny finoany dia nandeferan'i Kipriano ka noraisiny ho isan'ny Fiangonana indray, fa ireo nataon'ny mpampiana-diso batisa kosa dia nolaviny ka tsy noraisiny.
Ny hevitry ny Fiangonana, izay novelarin'i Stefano I (na Etiena I) (evekan'i Roma teo anelanen'ny taona 254 sy 257), dia nifanohitra tamin'ny an'i Kipriano, ary nihamafy hatrany izany tsy fitovian-kevitra izany teo amin'ireo antoko roa mifanandrina. Tamin'ny taona 257 dia maty martira i Stefano I, ka taorian'izany dia nomba ny heviny i Kipriano, ary nohamafisin'ny konsily tao Arlesy nampanaovin'ny emperora Konstantino I tamin'ny taona 314, ka lasa fampianarana ofisialin'ny Fiangonana. Nisy indray ny fanenjehana tamin'ny fanapahan'ny emperora Valeriano nanameloka ho faty an'i Kipriano izay notapahin-doha niaraka tamin'ny namany ka isan'izany i Flaviano avy ao Kartago.
Heverin'ny mpahay tantaram-piangonana ho isan'ireo Rain'ny fiangonana ngezalahy i Kipriano, indrindra tamin'ireo tsangan-kevitra nataony momba ny fandaminana ny ambaratongam-pahefana ao amin'ny fiangonana, izay nambarany tao amin'ny boky nosoratany tamin'ny taona 251 hoe De catholicae ecclesiae unitate ("Ny amin'ny firaisan'ny Fiangonana katolilka"). Maro koa ny boky hafa nosoratany ka isan'ireny ny De habitu virginum ("Ny amin'ny fitafian'ny virjina"), ny De dominica oratione ("Ny amin'ny Vavaky ny Tompo"), ny De bono patientiae ("Ny amin'ny hatsaran'ny faharetana") sy ny maro hafa koa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kipriano_avy_any_Kartago&oldid=977523"
Voaova farany tamin'ny 20 Novambra 2019 amin'ny 19:43 ity pejy ity.